ကောင်းမွန်ဝင်း: ခလေးအပြော လူကြီးအတွေး
ကျွန်မမြန်မာပြည်မှာနေတုံးက ရေဒီယိုကခဏခဏလာတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ ♪♪♪“ကျွန်တော့ ရည်မှန်းချက် တွေးလျှက်နဲ.ပျော်သည် ပျော်သည်။ ညီလေးညီမလေးများကို သွန်သင်ကာဆုံးမပေးမည်။ ♪♪♪　နောင်တစ်ခေတ်မှာကွယ် တိုင်းပြည် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်ရမည်။ ♪♪♪ ဆရာဝန်ဖြစ်ဘို. ကျွန်တော်ကြိုးစားမည်၊ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဘို.ကျွန်တော်ကြိုးစားမည်။ ဗမာ့သားကောင်းဇာနည် စစ်သားကြီးကို ကျွန်တော်မျှော်မှန်းသည်။♪♪♪
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　♪　♪　♪＊＊＊＊＊＊＊＊＊
“သမီးကြီးလာရင် အောက်ဆိုဒ်ကောင်းတဲ. အရာရှိမကြီးဖြစ်ချင်တယ်”
မူလတန်းကျောင်းသူကလေးမလေးက တကယ့်ကို တည်ကြည်ပြတ်သားစွာနဲ. မေးခွန်းမေးသူကို ဖြေကြားလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ အင်တာဗျုး ဗီဒီယိုလေးဟာ တနိုင်ငံလုံးကိုပျံ.နှံ.သွားပြီး တရုပ်လူမျိုးတွေ အံ.သြသွားခဲ.ရပါတယ်။
တရုပ်နိုင်ငံမှာ ကျောင်းတွေစဖွင့်ပြီး အတန်းတက်ရတာကတော့　သူတို.နိုင်ငံရဲ. ဆောင်းဦးရာသီ စက်တင်ဘာလ(၁)ရက်နေ.ဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်တုံဒေသ Guangdong (Kwangtung)၊ ခိုးရှူးမြို. Southern Metropolis Daily သတင်းစဉ်ကနေ ကျောင်းသားကျောင်းသူ အသစ်စက်စက်လေးများ ဆိုတဲ. ခေါင်းစဉ်နဲ. ကျောင်းဖွင့်စ မူလတန်းတက်မယ့် ခလေးများကို တွေ.ဆုံမေးမြန်းတဲ. အစီအစဉ်အတွက် ခိုးရှူးမြို.ထဲက မူလတန်းကျောင်းကလေး ကို သွားပြီး တီဗွီရိုက်ကူးခဲ.ပါတယ်။
ဒီလိုအဖြေက သူငယ်တန်းတက်မယ့် ခလေးတစ်ယောက် ကဖြေနိုင်တာ တော်တော်တတ်တယ်လို. ပြောရရုံကလွဲပြီး သိပ်မထူးဆန်းလှပါဘူး။ ထူးဆန်းတာက ဘာလဲ။ နောက်ကဆက်မေးတဲ. မေးခွန်းကိုဖြေတဲ. ခလေးရဲ. အဖြေကိုပါ။
“ဟို-----လေ။အောက်ဆိုက် အများကြီးရတဲ. အရာရှိမကြီးပေါ့------”
နောက်တနေ. စက်တင်ဘာလ (၂)ရက်နေ.မှာဒီအကြောင်းကို ထုတ်လွှင့်တဲ. အခါ အင်တာနက်က နေ ရှာဖွေကြည့်ရှုကြိမ်ရေပေါင်ူး ၁၄,၂၀၀ ရှိခဲ.ပြီး၊ ထုတ်လွှင့်ခဲ.တဲ. အစီအစဉ်နဲ. ပတ်သက်ပြီး သဘောထား မေးခွန်းစစ်တမ်းကောက်ယူကြည့်တဲ့ရလဒ်က “ကလေးပဲ။ သိပ်နားမလည် ပဲ ပြောတာပါ” ဆိုသူက ၁၀%၊ “ လူ.ဘောင်အဖွဲ.အစည်းကို ထင်ဟပ်ပြတာပဲ” ဆိုသူက ၅၅% ရှိတာတွေ.ရပါတယ်။
“အောက်ဆိုက်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာ ခလေးက နားမလည်ပါဘူး။ လူကြီးမိဘတွေက --သမီး အဲသလိုလုပ်နေရင် အမေတို. ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ တကယ်လို. အမေက အောက်ဆိုက်အများကြီးရတဲ. အရာရှိမကြီးဆိုရင် ဘာမဆိုဝယ်ပေးနိုင်တာပေါ. ” ဆိုပြီး ခလေးကိုပြောလို.ပေါ.။ ဒါကို ဒီလောက်ပုံကြီးချဲ.နေစရာမလိုပါဘူး လို.ဆိုသူတွေရှိသလို၊ “ခလေးစကား၊ အရူးစကားဆိုတာ အမှန်တွေပဲ။ ဒါဟာ အခုပြည်သူတွေရဲ. စိတ်သဘောကို ပြတာပဲ။လူတွေအားလုံး အောက်ဆိုက်ရမှ စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီး ဖြစ်နေရတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ က အကြောင်းရင်းပဲ ” လို.ဆိုသူတွေလည်းရှိပါတယ်။
အသံလွှင့်အစီအစဉ်ရဲ. မေးခွန်းမေးသူက “သမီးက အောက်ဆိုက်အများကြီးရတဲ. အရာရှိမကြီးအကြောင်းဘယ်လိုသိတာလဲ” လို.မေးတော့ ခလေးက “ မေမေပြောတာလေ” တဲ. ။ အဲဒါကိုတော့ မထုတ်လွှင့်ခဲပါဘူးတဲ.။
တခြားခလေးတွေကတော့ “ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်” “မီးသတ်လုပ်ချင်တယ်၊ လူတွေကို ကယ်ဆယ်ဘို.” “လေယဉ်မှူးဖြစ်ချင်”တယ် စသဖြင့် ခလေးတို. သဘာဝ တီတီတာတာဖြေခဲ့ကြပါတယ်တဲ.။
အထက်ပါ “အောက်ဆိုက်အများကြီးရတဲ. အရာရှိမကြီးဖြစ်ချင်တယ်” ဆိုတဲ. အကြောင်းအရာကိုတော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှာဖွေကြည့်ရှုသူတွေက သဘောထားမျိုးစုံ ရေးခဲ.ကြပါ တယ်။
ကြည့်ရှု ကြသူတွေဆီက ကော်မန်.( သဘောထား) တွေက တစ်နာရီကို ကော်မန်.(၉)ခုနှုန်းနဲ. လူပေါင်း ၁၃၆ယောက၊်က (အကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲထားသော)ကော်မန်.အရည်အတွက် ၁၄၂ ခု က ဒီစာရေးတဲ.အချိန်မှာ အင်တာနက်ပေါ်ရောက်ရှိနေခဲ.ပါတယ်။ အဲဒီအထဲက အနည်းငယ်ကို နမူနာအဖြစ် ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဂျပန်စာတတ်သော တရုပ်လူမျိုးများကပါ ပါဝင်ရေးသားထားကိုတွေ.ရပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုး။ ။ နိုင်ငံရဲ. အခြေအနေကို ခလေးကတောင်သိတယ်။
ဂျပန်လူမျိုး။ ။ လဒ်စားတာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုရှိတယ်။
တရုပ်လူမျိုး။ ။လဒ်စားလို.ဖမ်းခံရလည်း၊ ကိုယ်ကပြန်လဒ်ထိုးလိုက် (ရှိတာလေး ဝေမျှပေးလိုက်) ရင် ပြန်လွတ်လာအုန်းမှာ။
ဂျပန်လူမျိုး။ ။ ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာလည်း၊ အတူတူပါပဲ။
ဂျပန်လူမျိုး။ ။ ဘယ်လိုမိဘမျိုးတွေလဲ။ ခလေးကို ဘယ်လိုသင်ထားလဲ။
ဂျပန်လူမျိုး။ ။ အမလေးဂျပန်လူမျိုးပိုတောင်ဆိုးသေး။ မူလတန်းကျောင်းသားအရွယ်အကြီးဆုံးသားကို စားသောက်ကုန်အလစ်သုတ်ခိုင်းလို. ဟျေားဂိုခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ. အာ့ကာ့ရှိ စခန်းမှာ အခုလ၄ရက်နေ.က ဖူရုခါဝါမြို.မှာနေတဲ. ၃၃နှစ်အရွယ်အဖေနဲ. ၃၁နှစ်အရွယ်အမေဖြစ်သူတို.ကို ရဲကဖမ်းဆီးခဲ.တယ်လေ။
ဂျပန်လူမျိုး။ ။ ကျွန်တော်အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းက အမှတ်ပေးတာမှားနေတယ်လို. ဆရာ့ကိုသွားပြောတယ်။ ဆရာက “မင်းတော့ ဒီပုံအတိုင်းသွားလို.ကတော့ ရှေ.လျှောက်ပြီး လောကကြီးမှာ လူလုပ်ဘို. မလွယ်ဘူး” ဆိုပြီး အဆူခံရတယ်။ အဲဒီကလေးမိဘတွေလည်း အဲလိုမျိူးလားမှ မသိတာ၊ နော်။
တရုပ်လူမျိုး။ ။ ခလေးဆိုတာ အမှန်အတိုင်းရိုးရိုးသားသားပြောတာလေ။ လူကြီးလည်း တကယ်တန်းပြောကြကြေးဆို အဲလိုဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဟဲ ဟဲ။
ဂျပန်လူမျိုး။ ။ ကဲ အဲဒါတွေပြောပြီး အင်တာနက်ပေါ် ပွက်လောရိုက်နေလည်းအပိုပဲ။တော်ကြတော့။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ လဒ်စားတဲ. အရာရှိကြီးတွေ အဲလို အင်တာနက်သတင်းမျိုးနဲ. ဒီလို ဘလောက်တွေကို ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးဟေ့။
ဓါတ်ပုံကို http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B7%9E%E5%B8%82 မှကူးယူပါသည်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Friday, September 11, 2009
လေးလေးနက်နက် တွေးစရာပါ အစ်မ။ ညီမကတော့ ကလေးက မသိလို့ပြောတယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒီမသိတဲ့ ရိုးသားဖြူစင်စွာ ပြောလိုက်တဲ့စကားကပဲ ခေတ်ကို အထင်ဟပ်ဆုံးလို့ မြင်မိပါတယ်။ စာလေးဖတ်ပြီးတဲ့အချိန် ပို့စ်အစပိုင်းမှာ အစ်မရေးခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးကို နားထဲမှာ ကြားယောင်နေမိတယ် အစ်မရယ်...